Inkqubo kwi-iOS, njani kwaye uqale phi | IPhone iindaba
UCarmen rodriguez | | IPhone iindaba, Iapps zokusebenza, iOS
Ukuphuhlisa usetyenziso lwe-iOS kuya kufuneka usebenzise i Xcode, yintoni i Imo yophuhliso oluhlanganisiweyo, ekwabizwayo APHA (isifinyezo kwisiNgesi se IIndalo yoPhuhliso ehlanganisiweyo), Oko kuthetha ukuba yinkqubo yekhompyuter eneseti ye izixhobo zenkqubo.
Le IDE ibonelela nge- Umzobo womzobo eluncedo kakhulu kuphuhliso lwesicelo kwaye ibandakanya ulwimi olutsha lwenkqubo Swift, Ikhutshwe yiApple kulo nyaka.
I-Apple injalo ukukhuthaza iSwift, kodwa oko akuthethi ukuba awukwazi ukwenza inkqubo nge ezinye iilwimi njengeNjongo-C. Ulwimi oluthathe isigqibo luxhomekeke kuwe, nolu uluhlu lwe zixhobo ukukukhokela:
Qalisa ukuphuhlisa iiapps zikaIOS namhlanje: Le yeyona nto Isikhokelo esisemthethweni seApple Ukuqala inkqubo, qala kuxinzelelo lweXcode kwaye uqale kulwakhiwo lwesicelo sakho, siphumeze kwaye sigqibe ngokufaka kwiVenkile ye App.
Ukuzisa iSwift: Lulwimi olutsha lwe-Apple, kulula kakhulu ukulusebenzisa ke ukuba ufunda ekuqaleni, mhlawumbi kunjalo indawo emnandi ukuqala ukufunda.
IiVidiyo zoPhuculo zika-AppleI-Apple inokudityaniswa kweevidiyo zeWWDC ezifundisa iindawo zophuhliso, iingcebiso kunye nezixhobo, kufanelekile ukumisa ukuze ubone ezinye.
Isifundo sikaRay Wenderlich: Ukuba ufuna ukwenza umdlalo, iititshala zikaRay Wenderlich zezona ndawo zokuqala ezifanelekileyo. Kuya kufuneka ube unolwazi ngeSwift kunye neNjongo-C.
Amandla e-API e-AppleI-Apple inee-API ezininzi ezahlukeneyo zokufikelela kwizandiso ze-iOS 8, kubandakanya nezo zokuchukumisa i-ID, iifoto, HealthKit, kunye nezinye. Ukuziqhelanisa nezi APIs unako nyusa inqanaba lesicelo sakho ngokucacileyo.
Iklasi yeKhowudi yoPhuculo lweApp App: Ungafikelela kwifayile ye- iziseko zophuhliso simahla kwiiklasi zokwazisa kwesi sikolo.
Iiklasi zoPhuhliso ze-iOS zikaStanford: Ukunikezelwa kweStanford iiklasi zasimahla zokufunda i-iOS. Okwangoku zifumaneka kuphela kwi-iOS 7, kodwa kunokwenzeka ukuba ziya kukhupha uhlaziyo lwe-iOS 8 kungekudala.
1 Isikhokelo sokuPhononongwa kwesicelo
2 Isikhokelo sokuyila
Isikhokelo sokuPhononongwa kwesicelo
I-Apple inombono othile izicelo eziza kuvumela kwivenkile, ke kuluncedo ukuyazi imigaqo yayo nangaphambi kokuba uqalise usetyenziso. Ukuba akwenzi njalo, unokuchitha ixesha elininzi kwi-app engazukuvunyelwa ngu-Apple kwiVenkile yeApp. Ezi imigaqo bakwi Izikhokelo zoVavanyo lweVenkile ye App.
Xa ugqibile ukufaka isicelo, ungasithumela kwiVenkile ye App kunye ziya kujongwa ngokutsha ngokusekwe kumxholo wayo, uyilo kunye neenkcukacha zobuchwephesha. Ke ngoko kubalulekile ukuba usithathele ingqalelo iSikhokelo sokuHlola, Izikhokelo zokuHlola. I-Apple ikwanoluhlu lwe ezona zizathu zixhaphakileyo zokwaliwa.
Ngendlela efanayo apho izikhokelo ezithile Kwimeko apho ufuna ukusebenzisa nayiphi na i-API, eyona ixhaphakileyo yile:
Izikhokelo zokuHlawula iApple
I-Apple ifuna zonke ii -apps ezivenkileni zayo ukuba zibe nayo «ukungqinelana«, Kwaye nangona oku kunganyanzelekanga ukuba kuthethe uyilo olulungileyo, oko kuthetha ukuba usetyenziso lusebenzisa izinto ezifanayo ezisisiseko kujongano lomsebenzisi, oluneenkcukacha kwi Izikhokelo zojongano lomntu. Kuyo uyakufumana le nto bayifunayo kakhulu uyilo losetyenziso njengoko kuyilo lwe icon.
Ukuququzelela le nkqubo banesishwankathelo sento engenakwenziwa engenakwenziwa ukuze kube lula ukuqala, ungayibona kuyo Yenza kunye neeDnts. Ezinye izixhobo zezi;
Ukuyila iiNkqubo eziKhuluUkudityaniswa kweyona ntetho yeWWDC ibalaseleyo kuyilo loyilo.
Ukuyila ujongano lomsebenzisiIsikhokelo kuyilo lonxibelelwano kwi-iOS 8 usebenzisa izixhobo ezakhelwe ngaphakathi kwiXcode.
Kubalulekile ukuvavanya isicelo kwaye amehlo amatsha ahlala amkelekile, yiyo loo nto kubalulekile Sebenzisa abavavanyi be-beta abatyhala usetyenziso lwakho ukuya kumda. Kule meko sinokhetho olunomdla:
GitHub yeyakhe Ulawulo lwenguqulo yesoftware kunye nomsebenzi wokusebenzisana. Nje ukuba ubhalisele i-GitHub, kulula kakhulu ukudibanisa i-Xcode yakho kuyo, ke yonke into oyenzayo igcinwa apho kwaye lonke iqela liyafikeleleka. Ukuba ufuna uncedo oluncinci sebenzisa i izikhokelo.
UvavanyoCloud, sisicelo esivumela abanye abasebenzisi vavanya usetyenziso lwakhoKuya kufuneka ukhuphele kwaye ufake UvavanyoCloud.
Ukuphuhlisa i-iOS kukuqhelana neXcodeNje ukuba uyiqonde ukuba isebenza njani, ungabhala usetyenziso lwakho kwiilwimi ezininzi okanye ungene kwi-Swift.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » Inkqubo kwi-iOS, njani kwaye uqale phi
Ulwazi oluhle kakhulu, kuba upapasho olunjengolu ukwenza ukuba kulungele ukuyeka ngamaxesha ngamaxesha, enkosi.
enkosi kakhulu, kakhulu